Homeसमाचारदु:खद खबर ! युएईको आबुधाबीमा नेपाली कामदार बोकेको गाडी दु’र्घट्ना हुँदा ५ जनाको मृ’त्यु
January 16, 2020 Spnews समाचार Comments Off on दु:खद खबर ! युएईको आबुधाबीमा नेपाली कामदार बोकेको गाडी दु’र्घट्ना हुँदा ५ जनाको मृ’त्यु
युएईको आबुधाबीमा २४ जना कामदार बोकेको गाडी दु’र्घट्ना भएको छ । दु’र्घटनामा ५ जनाको मृ’त्यु भएको छ । सवारमध्ये १८ जना नेपाली कामदार रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अन्य ६ जना श्रीलंका र अफ्रिकी मुुलुकका महिला कामदार रहेको बताइएको छ । सवार सबै सरसफाइ सम्बन्धी काम एमबीएम कम्पनीका कामदार हुन् ।
कामदार सवार बस स्थानीय समय अनुसार बिहीबार बिहान ५.३० बजे आबुधाबीको अल रहा भन्ने स्थानमा दु’र्घटनामा परेको हो । काममा गइरहेको अवस्थामा उक्त बस अगाडिको लहरीमा ठोकिएर दु’र्घटना भएको जनाईएको छ ।
नेपाली कामदार बोकेको गाडी दु’र्घटना भएकोले मृ’त्यु नेपाली हुनसक्ने आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । तर, मृ’तकको पहिचना नभएको दूतावसले जनाएको छ । नेपाली कामदारको अवस्था र विवरण संकलन गर्न दूतावासका प्रतिनिधि घाइतेको उपचार भइरहेको बताईएको छ ।
घा’इतेहरुको आबुधाबीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दु’र्घट्नामा परेका नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न दूतावासबाट राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, उपनियोग प्रमुख रीता धिताल श्रमकाउन्सुलर भेषबहादुर कार्की र जनसम्पर्क अधिकारी (पीआरओ) उनीहरु उपचाररत अस्पताल पुगेका छन् ।
घा’इतेमध्ये ५ जना नेपालीको आबुधाबी खलिफा सिटीमा रहेको एनएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्यको मफरक र अल रहा अस्पतालमा उपचार भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अनलाइनखबरबाट